Unezinkinga nge-Screen Full ku-Chrome? Nayi ikhambi | Kusuka kuLinux
Unezinkinga nge-Screen Full ku-Chrome? Nasi isixazululo
umagazine | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Okokuqala yilokhu engikuthumele kuqala ngaphambi kwalo Mphakathi omkhulu. Kulokhu okuthunyelwe uzothola isisombululo esincane esizosebenza ngaphezulu kweyodwa ngokuzayo, noma lapho benalolu hlobo lwenkinga.
Ngizophawula ngecala lami: Ukuzulazula kubhulogi KusukaLinux Ngithole okuthunyelwe kokubuyekezwa kwesiphakamiso esisha esinikezwe ngabangane baka IHhovisi le-Kingsoft WPS, futhi kungumkhiqizo wamavukelambuso I-Kingoft Office okunikeza okuningi ukukhuluma ngakho emiphakathini yeFree Software.
Kufika ephuzwini ngokuthunyelwe, nginqume ukuzama ukuthi yisiphi lesi siphakamiso esisha I-Kingsoft, Ngilande isoftware kuwebhusayithi esemthethweni, kuvela ukuthi angizange ngigijime ngoba bekuyinguqulo ye-x32 futhi namanje ayikho inguqulo ye-x64.
Bekufanele ngifake imitapo yolwazi i386 ngisebenzisa umyalo olandelayo ovela kukhonsoli:
Konke okuphelele, ngikwazile ukwenza engikufunayo kepha lapho ngikuqala kabusha kuvela ukuthi kube nokungqubuzana neGoogle Chrome yami: Ayikwazanga ukuphuma kusikrini esigcwele. Ngiseshe futhi ngabheka okuningi kodwa angitholanga izimpendulo eziningi.
Ngemuva kwamahora amabili wokusesha nokusesha, ngavula imenenja yefayela futhi ngabheka indlela lapho iGoogle Chrome igcina khona izintandokazi zomsebenzisi ezigcinwe ku- ~ / .config /. Ukusuka kukhonsoli ngenze okulandelayo:
cd ~/.config/ && sudo mv google-chrome google-chrome.old
Okwenziwa yilo myalo ukuhambisa ifolda yezintandokazi kusuka kugoogle-chrome kuya kugoogle-chrome.old. Lokhu kulungise inkinga yami ye isikrini esigcwele.
Ukubuyisela amabhukumaka akho, amaphasiwedi, nezilungiselelo kusuka ku-Google Chrome, vele ungene ngemvume futhi uphinde uvumelanise idatha yakho.
Uma ungenayo i-akhawunti yakho yakwa-Google exhunywe ku-Chrome kuzofanela ukopishe ifolda ~ / .config / google-chrome.old / Default to ~ / .config / google-chrome / Default.
Yilokho-ke, ngiyethemba lo mhlahlandlela uzokusiza lapho uzithola ukulezi zimo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Unezinkinga nge-Screen Full ku-Chrome? Nasi isixazululo
Amazwana ayi-8, shiya okwakho
Njengokuphawula ngingakutshela ukuthi ngokwami ​​ukubona okwenzile nakho kusebenza ezinye izinhlelo okuthi ngesizathu esithile zingalungiswa kahle. Kungaba into efana nokuqalisa kabusha uhlelo kuzilungiselelo ezizenzakalelayo.
Izikhathi eziningana ngibonile isidingo sokususa amafolda wokumiswa kohlelo. Imvamisa zitholakala ekhaya lethu zifihliwe:
.cache / program_name
.config / program_name
.local / share / program_name
nasekhaya elifanayo negama «lohlelo». Ngiyacacisa ukuthi kufanele ususe kuphela ifolda enegama lezinhlelo ezisinika izinkinga futhi bangayenza kumphathi wethu wefayela njengomsebenzisi ojwayelekile. Noma kusuka kukhonsoli njengoba usho, kuhle ngaso sonke isikhathi ukwenza isipele njengoba wenza imikhonzo yehehehe.
UPablo Honorato kusho
Kuhle ukwazi ithiphu, yize ngingasebenzisi i-Chrome hehe.
Phendula uPablo Honorato
i-linux ebukhoma ende
Okokuqala okuthunyelwe okuhle kakhulu, iqiniso ukuthi kungisebenzisile ku-pc yentombi yami, kepha muva nje ngifake ubuntu 13.10 ukuze ngivivinye futhi kuvela ukuthi iphakethe le-ia32-libs ngo-13.10 alisasebenzi, lithinta izinhlelo eziningi ezifana ne-skype, iwayini, i-crossover, ezinye izinhlelo zokuguqulwa kwama-audio namavidiyo, ngethemba ukuthi bangakulungisa ukuze bafake iKingsoft Office ku-ubuntu 13.10, Sanibonani
unezinkinga nge-chrome? zama lesi sixazululo singisebenzele kahle.
# ukuzuza okungcono ukuthola
# apt-get remove –purge chrome
# thola ukufaka i-firefox
Ngeshwa, asinakho konke ukunambitheka okufanayo kwe-firefox, engikuthanda kakhulu nge-Chrome ukuthi wonke amabhukumaka wami, amaphasiwedi nedatha yewebhu ivumelaniswe ne-Google ngenkathi ineFirefox angazi ukuthi kukhona yini inketho yokwenza idatha eyisipele 😛
Kubonakala kimi ukuthi iFirefox inenketho efanayo, engike ngiyisebenzise kwesinye isikhathi ingangisebenzeli hehehe. Lesi ngesinye sezizathu esenza ngisebenzise i-Chrome noma i-Chromium, ngivumelanisiwe futhi ngikwazi ukufinyelela kudeskithophu yami, ithebhulethi noma kwenye ikhompyutha noma i-distro engiyifakile kukhompyutha yami. Ngena ngemvume futhi yilokho kuphela. 🙂
Ngokuqondile, yilokho engikuthandayo nge-Chrome, okulula ukukusebenzisa kunoma iyiphi i-pc, ilaptop, ithebhulethi ngisho ne-smartphone yami, ufaka nje i-imeyili yakho ye-Google ne-voila, unawo wonke amabhukumaka akho kanye nezinto ozithandayo ezivumelanisiwe.
Beka kabusha idokhu ye-eOS
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 13.10 Saucy Salamander